Brother စက်မှုစက်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -sewingmachineaccessories.com.tw
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Brother စက်မှုစက်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့စက်ရုံ Taiwan။ တက်ကြွစွာအကျိုးစီးပွားကျနော်တို့အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲစျေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဈေးကွက်ထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ်ပရောဂျက်နဲ့အတူသင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ OEM & နှစ်ဖွဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ။ အားကြီးသောနောက်ခံအရောင်ဒီဇိုင်နာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပင်များနှင့်အတူကျနော်တို့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအညီကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်ကြိုးစားဆိုတာနဲ့သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်။
, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, soonest ပေးအပ်ခြင်းအချိန်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုတင်းကျပ်တဲ့, ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုနေရာချ၎င်းတို့၏အမိန့်၏စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေရကြကုန်အံ့။
ပုံစံ - S07526-301 / S07527-001
၎င်းသည် Brother model B842 အတွက်အပိုပစ္စည်းများဖြစ်သည်,845,872 နှင့် 875.ထိုအပိုပစ္စည်းများကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိ Brother ကုမ္ပဏီသို့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်.အပိုင်းအစတိုင်းအတွက်အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲစစ်ဆေးပါတယ်.Brother ကုမ္ပဏီမှကျွန်တော်တို့ဆီကိုဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး.ငါတို့သိမ်းထားပြီ’သုည-ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပြန်လာ’ငါတို့ကုမ္ပဏီ Brother ကိုစတင်ထောက်ပံ့ကတည်းက.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/brother-industrial-sewing-machine-parts.html
အစ်ကိုမော်ဒယ်ဓားပြဓားSB1189-001/SB1191-001 ဒါက Brother model Bartack စက်ရဲ့အပိုပစ္စည်းများ.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓါးပေါ်တွင် tungsten သံမဏိဖြင့်ပုံသွင်းထားသောဓားကိုထုတ်လုပ်သည်.ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်တွင်တစ်နှစ်ကျော်အာမခံချက်ကိုပေးမည်ဟုကတိပေးသည်.
Brother စက်မှုစက်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် Brother စက်မှုစက်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 19,338 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ sewingmachineaccessories.com.tw